Dareemo Dambi, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxa jira hoggaamiyeyaal Masiixiyiin ah oo si joogto ah isugu dayaan inay dadka ka dhigaan kuwo dareemaya dambiile si ay xitaa wax badan uga sii beddelaan kuwa kale. Wadaadadu waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay kaniisadohooda uga yeeli lahaayeen camal wanaagsan. Waa shaqo adag mana canaanan kartid wadaaddada kaniisadda marka ay mararka qaar isku dayaan inay adeegsadaan doodo dadka ka dhiga inay dareemaan dambiile inay ka dhigayaan inay wax qabtaan. Laakiin waxaa jira habab ka xun kuwa kale, oo tan ugu xunna waa aragtida bilaa-kitaabka ah ee ah in dadku jahannamada ku jiraan, maxaa yeelay adigu injiilka uguma wacdid ka hor intuusan dhiman. Waxaad garan kartaa qof dareemaya xumaan iyo dambiile ah inuu ku guuldareystay inuu injiilka la wadaago qof horey u dhintay. Malaha taasi waa sida aad dareemayso.
Waxaan xasuustaa saaxiib Masiixi ah oo ka tirsan saaxiib iskuulka kaasoo u sheegay koox da 'yarta ah sheekada mugdiga ah ee la kulanka nin, halkaas oo uu ku dareemay dareenka adag ee ah inuu u sharraxo injiilka laakiin wuu ka gaabsaday inuu sidaas sameeyo. Kadib wuxuu ogaadey in ninkani uu isla gaariga ku dhacay isla maalintaas uuna dhintay. “Ninkani haatan jahannama ayuu ku jiraa xanuun daran oo aan la sheegi karin,” ayuu u sheegay kooxda. Kadib hakad xoogaa kadib, wuxuu raaciyay, "waana inaan ka jawaabaa intaas oo dhan!" Wuxuu u sheegay in sababtaas awgeed uu u kululaaday riyooyinka oo uu sariirta ku ooyayo sababta dhabta ah ee naxdinta liidata, ee sababi doonta in ninkaasi miskiinka ah uu ku silco dhibaatada weligeed ah.
Dhinaca kale, way garanayaan oo barayaan in 'Ilaah dunidan aad u jecel yahay adduunka oo isagu u diray Ciise inuu badbaadiyo, laakiin dhinaca kale, waxay umuuqdaan inay rumeysan yihiin in Ilaahay dadka u soo diro cadaabta maxaa yeelay waxaan ku guul darreynaa inaan injiilka ugu wacdinno iyaga. . Tan waxaa lagu magacaabaa "faham garasho" - marka labo waxbaris oo iska soo horjeeda la rumeeysto isku waqti. Qaarkood iyaga ayaa si farxad leh u rumeeya awoodda iyo jacaylka Eebbe, laakiin isla mar ahaantaana waxay u dhaqmaan sidii in gacmaha Ilaahay ay ku xidhan yihiin badbaadinta dadka haddii aan ku guul darrayno in aannu ku gaadhno wakhtigaas. Yooxanaa 6,40, Ciise wuxuu yidhi: “Tani waa doonistii aabbahay in mid kastoo arka wiilka oo rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah; waana sara kicin doonaa maalinta u dambaysa.
Waa u shaqeynta Ilaah inuu badbaadiyo, oo Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ahu sifiican ayey u socdaan. Waa deeq inay qayb ka tahay shaqada wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waa inaan sidoo kale la soconaa in Ilaah inta badan shaqeeyo inkastoo aan awoodin. Haddaad naftaada culays ku saartay damiir dambi inaad ku wacdiseen qof injiilka ka hor intaysan dhiman, maxaad culayska ugu gudbin Ciise? Ilaah aad uma liito. Qofna faraha ayuu ku galaa oo qofna ma geli karo cadaabta adiga darteed darteed. Ilaaheennu waa wanaagsan yahay, waana naxariis badan yahay, waana xoog badan yahay. Waxaad ku kalsoonaan kartaa inuu u joogo qofkasta, adiga oo keliya.